ရေဗက္ကာဝင်းရဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းနဲ့ ညဘက် အိပ်ယာတစ်ခုထဲမှာ အိပ်နေတယ်ဆိုတာကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ မယ်လိုဒီ – Suehninsi
ရေဗက္ကာဝင်းရဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းနဲ့ ညဘက် အိပ်ယာတစ်ခုထဲမှာ အိပ်နေတယ်ဆိုတာကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ မယ်လိုဒီ
Sue | June 18, 2020 | ရသစုံ | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ မယ်လိုဒီကတော့ လတ်တလောမှာသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းနဲ့ကွာရှင်းပြီးထားဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာ အတိုက်အခိုက်နဲ့ကောလဟာလတွေ မပြတ်ထွက်နေခဲ့တာပါ။ သူမကတော့ ဘုရားတရားကိုသာအာရုံစိုက်ပြီး သားလေးနဲ့အချိန်ကုန်
ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှုတွေ တရစပ်ဖြစ်လာတာကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ သူမအားစွပ်စွဲပြောဆိုမှုတွေကို “စိတ်လျော့ ညီမလေးရေCb ကစာလေးတွေ တင်လိုက်ပါလား။ ရှင်းပြရတာ မောနေပါ့မယ်။ အစ်မတို့အိမ်ထောင်ရေး ဘယ်အချိန်ကစ ဘယ်အချိန်
အဆုံးသတ်လဲဆိုတာ အစ်မနဲ့အစ်မ အမျိုးသားနဲ့အသိဆုံးပါဘဲ။ ဘယ်အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့လဲ ပြောပြပါဦးတခြားသူတွေလဲရှိတယ် ပြောခဲ့တာကိုး အစ်မကပိုနာမည်ကြီးတော့ ပိုဂေါ်တာပေါ့ဘာလဲ video call မှာ ဘာလုပ်နေကြလို့လဲလာနောက်မနေနဲ့
ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ်သိပါလူတစ်ယောက်ဆီက လိုချင်တာတွေ မရတာနဲ့တစ်ရပ်ကွက်လုံးကို ရန်လိုနေတာတော့များတယ်ကွယ်”ဆိုပြီးပြန်လည်ချေပဖြေရှင်းခဲ့တာပါ။. ပရိသတ်ကြီးရေ မယ်လိုဒီတစ်ယောက် ပြဿနာတွေ အမြန်ဆုံးအေးချမ်းဖို့ ​ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
ပရိသတျကွီးရေ မယျလိုဒီကတော့ လတျတလောမှာသူ့ရဲ့ခငျပှနျးနဲ့ကှာရှငျးပွီးထားဖွဈကွောငျး တရားဝငျဖျောပွပွီးတဲ့နောကျမှာ အတိုကျအခိုကျနဲ့ကောလဟာလတှေ မပွတျထှကျနခေဲ့တာပါ။ သူမကတော့ ဘုရားတရားကိုသာအာရုံစိုကျပွီး သားလေးနဲ့အခြိနျကုနျ
ဆုံးနတောဖွဈပါတယျ။ တိုကျခိုကျမှုတှေ တရစပျဖွဈလာတာကွောငျ့ ဒီနမှေ့ာတော့ သူမအားစှပျစှဲပွောဆိုမှုတှကေို “စိတျလြော့ ညီမလေးရေCb ကစာလေးတှေ တငျလိုကျပါလား။ ရှငျးပွရတာ မောနပေါ့မယျ။ အဈမတို့အိမျထောငျရေး ဘယျအခြိနျကစ ဘယျအခြိနျ
အဆုံးသတျလဲဆိုတာ အဈမနဲ့အဈမ အမြိုးသားနဲ့အသိဆုံးပါဘဲ။ ဘယျအခြိနျမှာ သူငယျခငျြးဖွဈခဲ့လဲ ပွောပွပါဦးတခွားသူတှလေဲရှိတယျ ပွောခဲ့တာကိုး အဈမကပိုနာမညျကွီးတော့ ပိုဂျေါတာပေါ့ဘာလဲ video call မှာ ဘာလုပျနကွေလို့လဲလာနောကျမနနေဲ့
ကိုယျ့အခွအေနကေိုယျသိပါလူတဈယောကျဆီက လိုခငျြတာတှေ မရတာနဲ့တဈရပျကှကျလုံးကို ရနျလိုနတောတော့မြားတယျကှယျ”ဆိုပွီးပွနျလညျခပြေဖွရှေငျးခဲ့တာပါ။. ပရိသတျကွီးရေ မယျလိုဒီတဈယောကျ ပွဿနာတှေ အမွနျဆုံးအေးခမျြးဖို့ ဆုတောငျးမတ်ေတာပို့ပေးခဲ့ပါဦးနျော။
Source : Melody Myo’s Facebook
နှလုံးနဲ့ သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတွေအပြင် အဆီပါကျစေတဲ့ စပျစ်သီးအစေ့ အစွမ်း
အလုပ်တွေကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းပေမယ့် အလှူလေးတွေလုပ်လိုက်ရရင် ရင်ထဲအေးချမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
စေတနာထားပြီး လူတိုင်းကို ကူညီခဲ့သမျှ သီတင်းကျွတ်မှာ မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်တာကိုခံစားခဲ့ရတဲ့ ယုန်လေး